2019: Buhari ajụla ibinye aka n'iwu ntuliaka - BBC News Ìgbò
2019: Buhari ajụla ibinye aka n'iwu ntuliaka
14 Maachị 2018
Nkenke aha onyonyo Onyeisiala Naịjirịa bụ onye ikpeazụ ga-ebinye aka n'akwụkwọ maka ịhazigharị ụsoro ntụliaka ndọrọndọrọ ọchịchị ụgbụa
Onyeisiala Naịjira bụ Muhammadu Buhari degara ndị ụlọ omeeiwu sineti akwụkwọ taa na ya agaghị ebinyeli aka n'akwụkwọ iwu ndegharị enwere gbasara ntuliaka nke afọ 2019.
N'akwụkwọ ahụ a gụrụ n'ụlọ sineti taa, Buhari kọwapụtara mkpa ọ dị na o binyeghi aka n'akwụkwọ ahụ, o kwuru na ọ ga-emegide ikike ndị Independent National Electoral Commision (INEC) bụ ndị na-ekpokoba ntuliaka na Naịjirịa.
Nke a bụ dịka akwụkwọ iwu Naịjirịa si kwuo na sektshon 15(A).
N'akwụkwọ ahụ, Buhari kwuru na mmezi e mere na sekshon 138 nke akwụkwọ iwu ntuliaka mere maka iwepụ ohere dị mkpa nke pụtara na e nwere ike ịgbagharị ntuliaka emere ga-eme ka ndị na-azọ ọchịchị ghara inwe ohere inweta ntuliaka dị tọrọ atọ.
Sineti ga-amalite nyocha ụlọakụ
Sineti akụpụla alo imegharị iwu NYSC
O gosipụtakwara ebe ọzọ o nwere nsogbu bụ n'akụkụ 152 na 325 bụ ebe o kwuru na ọ na-agbajọ ikike ụlọ omee iwu ime iwu maka ndị okpuruochịchị ime obodo.
Cheta na ndị sineti nọ ụbọchị Feburuwarị 14, hazie ndegharị edegharịrị ka ọkwa onyeisiala bụrụ ọkwa ikpeazụ a ga-eme ntuliaka ya na Naịjirịa ebe a ga-ebuụzọ mee nke ndị ụlọ omeeiwu, nke ndị gọvanọ esote ya.
Mana e mee nke a, ọ pụtara na ndị ga-azọ ọkwa onyeisiala ga-achịpụ ya na 2019.
Rex Tillerson ezutela Buhari
'Anyị ga-eji mkparịtaụka tọpụta ụmụakwụkwọ 110 a tọrọ'
Ndị Sineti akụpụla alo ka ụmụnwaanyị NYSC yiwe peteri
Ezekwesili: Aga m akpọpụta Naịjirịa n'ụbịam
Stan Lee: Ihe ise ị maghị maka ya